PressReader - Ilanga: 2018-11-05 - UKaunda wethule ingqalasizinda yezigidi zamarandi emiphakathini yasemakhaya
UKaunda wethule ingqalasizinda yezigidi zamarandi emiphakathini yasemakhaya
Ilanga - 2018-11-05 - Ikhasi - MABUYI MKARRY
NJENGENGXENYE yezinhlelo zenyanga yezokuthutha, uMnyango wezokuThutha KwaZuluNatal uqhubekile nokugqamisa uguquko osulwenzile ezimpilweni zemiphakathi yasemakhaya, lapho uMphathiswa uMxolisi Kaunda edlulisele ingqalasizinda esiphothuliwe kule miphakathi. Le ngqalasizinda ihlanganisa izigaba zokuqala zemigwaqo uP129 noP130 kanye nebhuloho iDlavudlavu ngaphansi kukaMasipala waseMpendle. Le migwaqo ixhumanisa idolobha laseMpendle namanye aseduze njengeHowick, iMooi River ne- Underberg. Emgwaqeni uP130 kufakwa itiyela elingu- 21.9 km ngemali ebalelwa ku- R697.9 million. Isigaba sokuqala esihlanganisa nebhuloho iDlavudlavu sesiphothuliwe ngesamba sikaR132.33 million. Isigaba esesiphothuliwe somgwaqo u- P129 singamakhilomitha amathathu ngemali kanti sidle u- R46.3 million. Uma usuphothuliwe uzoba ngu-15.5 km ubude ngemali ebalelwa ku- R398.5 million. Amanye ama- project adluliselwe emphakathini waseMsinga, okunguP373 no- P280. Umgwaqo u-P373 okade walindelwa nongu- 22,2 km ubude, ngaphansi kweNkosi yamaChunu, uzoba usizo olukhulu emphakathini ebese kunesikhathi unenselelo yokufinyelela emisebenzini kanye nasezikoleni. Lo mgwaqo udle imali ebalelwa kuR135,7 million. Ngakolunye uhlangothi umgwaqo u- P280 ongaphansi kobuKhosi bamaThembu, amakhilomitha amane asephelile ngemali enguR95, 4 million. “Kuyasijabulisa ukuthi kule misebenzi kubakhona nosonkontileka bendawo abahlomula ngamathuba. Njengoba siqhubeka nohlelo lwethu lwezinguquko kwezomnotho olubi- zwa nge- Radical Socio- Economic Transformation, sizoqinisekisa ukuthi isibalo sosonkontileka bendawo Siyanda,” kusho uKaunda. UMphathiswa ucacise ngohlelo lomnyango lokuthuthukiswa komnotho olubizwa nge- IGULA ( Inclusive Growth, Unity and Economic Liberation of Africans in particular and Blacks in general). “Kulolu hlelo IGULA sithi awukho umsebenzi ozokhishwa umnyango onganikezi ingxenye engu- 35% ohlukaniselwa intsha, abesifazane, omakadebona bamasosha kanye nabaphila nokukhubazeka,” kusho uKaunda.
IZITHOMBE: MBUYI NDLOVU
UMphathiswa uMnu Mxolisi Kaunda ebambisene neNkosi uNgangendlovu Mchunu, iMeya yaseMsinga uKhansela uBusiswa Ngcobo, uSomlomo kaMasipala wesiFunda uMzinyathi uKhansela Joshua Sikhakhane, iLunga lesiGungu esiPhezulu soMkhandu uMzinyathi uKhansela uLinda Ngubane kanye neKhansela uTyson Kunene onguSomlomo kuMkhandlu waseMsinga ngesikhathi bevula ngokusemthethweni imigwaqo u-P373 kanye no-P280.
UMphathiswa wezokuThutha, ukuPhepha nokuXhumanisa uMphakathi KwaZulu Natal uMnu Mxolisi Kaunda uhambisana neMeya yoMkhandlu waseMpendle uKhansela uSizwe Ndlela, Inkosi yakwaNxamalala uSimphiwe Zuma, uNdunankulu wesizwe saKwaMolefe Mjwara kanye namalungu omphakathi ngesikhathi evula ngokusemthethweni umgwaqo u-P129 eMpendle.